Castle iray isaky ny faritany Andalusiany (I) | Vaovao momba ny dia
Trano iray isaky ny faritany Andalusiany (I)
Carmen Guillen | | Tanànan'ny Espana, Cordova, Huelva, Inona no ho hita, Sevilla, Tsangatsangana
Tombontsoa ny mipetraka any Andalusia, na farafaharatsiny dia amin'ny lafiny sary sy toerana mahafinaritra no ananantsika akaiky sy akaiky antsika. Ary raha misy zavatra be dia be ao amin'ny malalantsika Andalusia, tsy isalasalana fa ireo lapa. Ny tantara dia nitondra azy ireo teto amintsika ary manao izay rehetra azo atao izahay mba hitehirizana azy ireo ho toy ny fananganana lehibe tokoa.
Amin'ity lahatsoratra ity androany dia tonga aho mba hampirehareha ny taniko, hitondra trano mimanda iray isaky ny faritany Andalusia. Afaka nilaza zavatra maro hafa koa aho, saingy tsy te-hahavoky anao koa. Izy ireo dia 4 amin'ireo lapa 8 izay holazainay amin'ity lahatsoratra roa ity, izay avy amin'ny faritany iray, izay nofidiko mba hahafantaranao bebe kokoa momba ny any atsimon'i Espana.
1 Castle of Niebla, any Huelva
2 Alcazar an'ny Seville
3 Castle of Almodóvar del Río, Córdoba
4 Castle of Sancti Petri, any San Fernando (Cádiz)
Castle of Niebla, any Huelva
Volana vitsivitsy lasa izay dia nitondra lahatsoratra iray momba anao ity lapa ity aho, izay azonao vakiana eto. Fa raha mila zavatra voafintina kokoa momba izany ianao dia mamakia hatrany.
Niebla dia fanjakana Taifa matanjaka taloha. Io fanjakana io, dia mbola namela antsika ihany ankehitriny, rindrina mahatsiravina sy trano mimanda izay, mahaliana, naorina taorian'ny fotoanan'ny Reconquest.
El Castillo de Niebla, na fantatra koa amin'ny hoe Castle an'ny Guzmanes izy io dia miorina ao anaty fefy rindrina goavana fiavian'i Almohad. Ao anatin'ny rindrina dia misy ihany koa ny tranon'ny mponin'i Niebla manokana. Ity lapa ity dia tafavoaka velona tamin'ny horohoron-tany, ny fahirano niainana nandritra ny Adin'ny Fahaleovan-tena, ary mazava ho azy, ny fandehan'ny fotoana tsy hita noanoa. Fa matanjaka ny rindriny, zavatra manaitra ny mpizahatany mitsidika azy isan'andro.
Alcazar an'ny Seville
El Alcazar an'ny Seville Izy io dia iray amin'ireo asa lehibe indrindra ao an-drenivohitr'i Seville. Ity andiam-panorenana mahavariana ity dia natsangana teo anelanelan'ny Taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX ary hahatratra ny famirapiratany lehibe indrindra amin'ny andron'ny mpanjaka Pedro I, izay tamin'ny tapaky ny taonjato fahefatra ambin'ny folo dia nanome ny lapa izay endrika Mudejar mampiavaka azy ka mbola hita ankehitriny.
Alfonso X, ny Monarchs katolika na Carlos V, dia vitsivitsy monja tamin'ireo izay nonina tao anatin'ny rindriny ary nanamboatra tsikelikely ny haingon-trano sy ny fanamboarana azy amin'ny fampiasa sy ny tsiro isaky ny vanim-potoana. Ity karazan-kevitra isan-karazany ity dia niteraka andiana originality mahatalanjona sy goavambe karazany isan-karazany.
Tsy isalasalana fa trano tsy maintsy hita raha mamaky an'i Seville ianao.
Castle of Almodóvar del Río, Córdoba
Ity lapa nisy fiaviana silamo ity dia namboarina hatrany hatrany y tafaverina tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX. Tsy azo diso izy Fomban'ny Gothic-Mudejar mahatonga azy io ho iray amin'ireo trano mimanda mahavariana indrindra ao Andalusia. Ary koa noho ny fikajiana ny fiarovana azy sy ny fananana ny tena izy sy ny mahazatra an'ireo lapa ao amin'ny angano izay eritreretintsika rehetra.
Rehefa mijoro eo an-tampon'ny tanàna ianao dia ho afaka mankafy amin'ny vatany ny fomba fijery mahafinaritra any ambanivohitra Cordovan, ary koa mandehandeha mamaky ny patio sy ny lalantsarany ary afaka mahita ireo tilikambo mahafinaritra ao aminy: ny kianja, ny boribory ary ny fanajana.
Castle of Sancti Petri, any San Fernando (Cádiz)
Ity lapa mampiavaka ity dia a fiarovana mimanda hita eo amin'ny nosy San Fernando, Cádiz. Mety tsy manam-paharoa ny fitsidihanao satria raha mandro amin'ny morontsiraka faran'ity tanàna mahafinaritra ity ianao dia afaka mahita io fanamboarana lehibe io amin'ny lafiny hafa. Zavatra iray izay azo iainana ihany amin'ny toerana vitsivitsy voafantina. ny tilikambo fiambenana is the fananganana taloha, satria nanomboka ny 1610 izy io, ary ny sisa amin'ny fanamboarana, toy ny rindrina sy ny atin'ny vala, dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Ny fitsidihana an'ity lapa ity dia mety ho traikefa tsy manam-paharoa, indrindra amin'ny fahavaratra, satria maro ny zotra amoron-dranomasina sy fitsidihana azy io. Ankoatr'izay, ny tanàna dia iray amin'ireo olona nandray ahy tsara indrindra.
Raha te hahafantatra ny ambin'ny lapa voafantina amin'ity lahatsoratra roa ity ianao dia vakio ity manaraka ity miaraka amin'ny lohateny mitovy. Ao anatin'izany no hiresahantsika kintana 4 hafa, fa amin'ity indray mandeha ity any amin'ny faritanin'i Malaga, Granada, Jaén ary Almería. Iza no ho? Manana ny tianao indrindra ve ianao? Ataoko, ary avy eo hampahafantariko anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Trano iray isaky ny faritany Andalusiany (I)